Arimaha Cunto karinta WICShopper-Save Money | JPMA, Inc.
In ka badan 25 sano, Arrimaha Cunto karinta waxay qoysaska ku awoodsiisay xirfadaha inay ku kala fidiyaan miisaaniyaddooda cunno una kariyaan cunno caafimaad qabta si carruurtooda ay ugu helaan guryo nafaqo leh. Hoos ka daawo muuqaalka si aad u aragto sababta Karinta Arrimaha!
Waxaa ka heli lahaa…
Qoyskaagu wax bay cuni karaan iyagoo caafimaad qaba iyagoon jabinin baanka. Cuntada u diyaarsan miisaaniyadayada iyo talooyinkan ayaa kuu muujinaya sida.
Doolarka qiimaha cuntada ah celcelis ahaan qoysaska Maraykanka ayaa soo saaray sanadkiiba.
Taabo si aad u aragto talooyinka 10 si loo yareeyo cuntada khasaartay
Waxaad kaydsan kartaa lacag iyo qashin yar oo aad u yar oo aad soo iibsan kartid iyo talooyin karinta.
Dhamaantood waxay ka bilaabmaan gaariga.
Cunto yar yar ayaa ka bilaabata dukaanka raashinka. Ku noolow sheyga "Iibso waxaad u baahan tahay, oo cun cunta waxa aad iibsaneyso." Marwalba waxaad leedahay qorshe iyo liis ka hor intaadan dukaanka gadan. Hubi boorsadaada iyo qaboojiyahaaga ka hor intaanad u socoto dukaanka si aad u hubiso inaad iibsanayso waxa aad dhab ahaantii u baahan tahay.
Iibso wax soo saarka cusub todobaadkiiba mar.
U iibso miraha cusub iyo khudradda dufanka kaliya haddii aad u isticmaali doonto ka hor intaanay xumayn. Haddii aad awooddo inaad u tagto dukaanka raashinka toddobaadle, u iibso kaliya wax soo saarka cusub oo kugu filan si aad usbuuca dambe u qaadatid.
Kawaari la miraha iyo khudradda la kariyey.
Waxay noqon karaan xalka wanaagsan haddii aadan hubin inaad awoodi doontid inaad isticmaasho cuntooyin cusub ka hor inta aysan xumeyn. Lacagta: waxay badanaa ka awood badan yihiin kuwa cusub waxayna noqon karaan kuwo nafaqo badan leh.
Hudheelka caanuhu waxay noqon karaan qarsoodi ah in la cuno raashin dhadhan fiican leh oo ka soo baxa cuntada haddii kale ay tagaan qashinka. Akhri xayiraadeena 10 si aad u heshid koodhkaaga.
Cunto u-qorto baahiyahaaga.
Baro inaad wax ka beddesho cuntada si aad u daboosho baahiyahaaga oo aad isticmaasho waxa ku jira qaboojiyahaaga. Isbedel ku samee soo-saarka ku salaysan cuntooyinka aad haysato, oo ay ku jiraan kuwa hadhay.
Samee saaxiibkaa saaxiibkaa.
Qabooji rootiga markii aan isla markiiba la isticmaali doonin, ama haddii wax uun kaaga hadhay (rootiga waxaa lagu keydin karaa qaboojiyaha ilaa 6 bilood). Kariji khudradda hadhay si loogu isticmaalo maraqyada dambe ama shiil walaaq. Googoo oo ku keydi miraha cusub qaboojiyaha si aad ugu isticmaasho Khudradda Khudradda.
Isticmaal miro khudrad ah ka hor intaanay xumeyn.
Isku dar miraha salad khudradeed ama badarka sare leh miro jarjaran. Kari nooca berry, tufaaxa ama isteroberi ku shiil jeexan ama u burbursan. Ku isticmaal miro bisil muufka, rootiyada, ama canjeelada.
Isticmaal khudaarta cusub ka hor intaanay xumeyn.
Ku dar khudradda maraqyada, maraqa, maqaarka, caleenta, suugada, ama qasacadaha. Isku darka khudradda iyo dhayada salad yar oo loogu talagalay saxan dhinaca ama cunto fudud.
Kala beddelashada cuntada hadhaaga cusub.
Kala beddel baradho la shiiday oo la mariyo maraq sharaf leh iyaga oo isku darsamaya kaydka, khafiif ah oo khal, basasha, karootada iyo walxaha kale ee aad haysato.
Cuntada ku dhaji cuntooyinka badan.
Isticmaal maaddooyinka wax ka badan hal mar si aad u badbaadiso lacag ugana ilaaliso qashinka cuntada. Ku dar khudaarta si aad u sameyso bakeeriga ama isku darka si aad u sameyso saladh isku dhafan.
VIDEO: Sida loo barbardhigo Fresh, Frozen and Conced Produced
VIDEO: Sida Loo Qiimeeyo Qiimaha Cuntada
Nasteexo wanaagsan ayaa fure u ah in lagugu badbaadiyo waqti iyo lacag.
Mar dambe safarada daqiiqadaha ugu dambeeya uma aado dukaanka si ay ugu soo qaataan walxo aad seegtay. Haddana mar dambe kuma qarashgareyso $ 10 dheeraad ah shay aadan dhaafin karin intaad halkaas joogtay! Raac tilmaamaha hoose si aad gacanta ugu hayso waxyaabaha cuntada degdega ah iyo kuwa caafimaad leh leh.
Ku dhaji talooyinka 10 ee loogu talagalay xargaggaaga
1. Ku hay miro dhan.
Buuxi kalluunka aad ka buuxdo baastada hadhuudhka ah, bariiska buniga, ari, roodhida, iyo kuwa kale ee ugu sarreeya hadhuudhka. Hantid markaad aragto iib wanaagsan. Ama, iibso daan badan. Tuubbo badani waxay leeyihiin inta badan sicirka unugyada ka fiican inta la baakadeeyay.
2. Ku rid digirta.
Digirta qasacadaysan ama qalalan waxay kudartaa maraq badan, saladhyada, iyo baastada. Ku beddel digirta meel ka mid ah hilibka badhkiis ee tacaska ama saxamada kale. Way ka jaban yihiin waxayna ku yar yihiin dufanka buuxa. Raadi soodhiyam-yar ama milix aan lagu darin markaad iibsanayso qasacadaysan.
3. Ha iloobin miraha iyo khudaarta.
Wax soosaarka qasacadaysan waxaa lagu soo xushay heerkiisii ​​ugu sarreeyay, sidaa darteed waxaa ka buuxa nafaqooyin waaweyn. Ku darso miraha qasacadaysan ama tufaaxa (sonkor laguma darin ama ku qasacadaysan sharaabkooda) sida cunnooyin fudud oo degdeg ah carruurta. Hadhuudhka qasacadaysan ama digirta cagaaran waxay si dhakhso ah oo fudud u sameeyaan suxuunta dhinaca. Tamaandhada qasacadaysan waxaa loo isticmaali karaa doolsho, maraqyo, casseroles, iyo cuntooyin kale oo badan.
4. Kalluunka muuqaalka.
Wax kale oo laga yaabo inaadan ka fekerin iibinta qasacadaysan waa kalluun. Laakiin kalluunka qasacadaysan waa qarsoodi aad u weyn si aad u hesho kaluunka badan oo kaladuwan oo caafimaad leh xagga cuntadaada hab ku habboon. Isticmaal salmon qasacadaysan si aad ugu darsato borotiinka salad, bacaha, iyo baastada.
Miro iyo miro qalalan ayaa sameeya waxyaabo duugmo leh. Isku day inaad isku dhex gashid qasacad yar oo fudud oo fudud. Ku dar siriyaalka kulul, alaabta la dubay, ama yogurt si aad u buuxiso feeraha. Ku daadi salad ama cagaaran qoraxda si aad ugu darto macaan iyo qadar.
6. Ka fikir dibedda firileyda.
Kaydso hadhuudh dhan, badarka sonkorta hooseeya marka aad hesho iib wanaagsan. Kudar isku darka raad raashinka fudud. Ama, burburi oo u isticmaal sida dahaadhka hilibka, digaagga, iyo kalluunka.
7. Buuxi kareemkaaga dhadhan.
Qandhada iyo noocyada kale ee la midka ah, sida Dijon mustard, waxay ku fiican yihiin dhejiska soodhada leh, soodhada guriga. Ama u isticmaal si ay u sameeyaan marinade dhadhan leh ee borotiinka ama khudaarta. Apple khamri, khamri cas, bariis, iyo balsamic balsamic waa dhammaan xulashooyinka wanaagsan.
8. Waxyaabaha ku dhuftey.
Isagoo ka hadlaya dhadhanka, sii caleemaha qalalan iyo dhirta aad marar badan isticmaashid. Isticmaal inaad ku darto dhadhan meel cusbo ama dufan dheeraad ah.
9. Maalgashiga dufanka caafimaadka leh.
Baalasha la sameeyo dufanka caafimaadka leh waa wax fiican oo loo isticmaalo qoraxda, dubista, khudaarta cagaarka, samaynta salad salad, iyo waxyaabo kale oo badan. Saliida Canola waa doorasho caafimaad oo qiimo jaban ah oo loo isticmaalo karinta cuntada. Saliidda sayniska ah waxay noqon kartaa mid qiimo jaban marka la samaynayo dharka ama qalabka casriga ah.
10. Soo iibso alaabta wax lagu dubo ee aasaasiga ah
Hayso maaddooyinka aasaasiga ah sida burka, baking soda, iyo budada dubista oo si haboon loogu kaydiyo daboolka. Isticmaal iyaga si aad u bedesho hal qayb ka mid ah saxan dhamaystiran. Miyuu qabaa tufaax ama moos ah?